ओलीको प्रश्न : देशको एउटा नेताले सरकारलाई सहयोग नगर भनेर कर्मचारीलाई भन्न मिल्छ ? : RajdhaniDaily.com sharethis
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निजामती कर्मचारीले कुनै पनि सरकारलाई असहयोग गर्न नहुने बताएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै ओलीले जुन पार्टीको सरकार आए पनि सहयोग गर्न अपिल गरे । तर, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारलाई असहयोग गर्न आह्वान गरेको भन्दै उनले गुनासो गरे ।
‘म प्रधानमन्त्री छँदै, नेपालका दोस्रो पार्टीले कर्मचारीहरू भेला गरे। तर त्यहाँ एकपछि अर्को नेताको निर्देशन के रह्यो भने सरकारलाई असहयोग गर भन्दै निर्देशन दिइयो। म छक्क परें, एउटा देशको नेताले सरकारलाई असहयोग गर भनेर कसरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिन्छ ? मलाई अचम्म लाग्यो। मलाई आश्चर्य लाग्यो। तपाईंहरू त्यसो नगर्नुहोस्, जसको सरकार आए पनि नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नु,’ ओलीले भने ।
उनले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्न र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिनसमेत दाबी गरे । आफूले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने निर्णयले भ्रष्टाचारीको मतमा ढ्यांग्रो ठोकेको बताए ।
कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि पर्यटन मन्त्रालयको ‘एक्सन’
आईपीएल असोज पहिलो साता
दुई वर्षिय वालक अपहरण गरेर बोरामा प्याक गर्नै लाग्दा अपहरणकारी पक्राउ
नेपालमा कोरोनामुक्त ७४ प्रतिशत
पीसीआर परीक्षण कहाँ र कसरी गर्ने ?